SomaliTalk.com » Dhul-Badeedka Soomaaliyeed: Been aan gabasho lahayn oo si joogto ah la idiinku sheego, taas oo aan cidna lagu ciqaabin . Q.1aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Saturday, October 9, 2010 // 7 Jawaabood
Warbixin dheer oo uu qoray ururka ECOTERRA oo ku saabsan badda Soomaaliya ayaa cinwaankiisu ahaa “Dhul-badeedka Soomaaliya: Been aan gabasho lahayn oo si joogto ah la idiinku sheego.” Warbixinta oo ka kooban dhawr qaybood waxay u qoran tahay qaab ah “beenta la sheego,” iyo “xaqiiqada jirta,” oo jawaab u ah. Qoraalkaas oo SomaliTalk.com soo tarjumtey hoos ka akhri:
Warbixinta ECOTERRA – Qaybta 1aad:
Qaybta 2aad AKHRI….
Akhri Qaybaha Kale: http://somalitalk.com/tag/ecoterra/
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: Badda, ECOTERRA
7 Jawaabood " Dhul-Badeedka Soomaaliyeed: Been aan gabasho lahayn oo si joogto ah la idiinku sheego, taas oo aan cidna lagu ciqaabin . Q.1aad "
Sunday, October 10, 2010 at 9:08 pm
Aad ayaad ugu mahadsantihiin sida aqoonta ku salysan ee aad uga war
wabixsaan dhibaatada lagu hayo soomaaliya. Waxaanse aad ula yaabanahay,wixiinu soomaali jacayl ka weyne waa maxay shaqadiinu?
Mise aniga ayaa rajo dhigaye soomaali daacad ahi way jirtaa. Mar labaad waa ku mahadsan tihiin warbixinadiina waafiga ah.
S. ISSE says:
Sunday, October 10, 2010 at 7:06 am
ASC. Aad baan ugu farxaa Qoraalkina iyo dadaalkina., Balse waxaan isweydiya marka laga hadlaayo BADDA IYO BIRIGA Somaaliya Websiteyaa intooda badan waxba kama Qoraan.
Mise ma fahansana arinto sidee MUHIM u tahay.
ALLAH haydin garabgalo.
Sunday, October 10, 2010 at 6:46 am
Nuur cade wuxuu saxiixay warqada beenta ah oo ogolaanshaha gumeysiga badda, waxaa ku qoran warqadaas haddii aan akhrideen in ay ciidamadaasi bad iyo bari meeshay doonaan galayaan, cidii ay doonayaan dilayaan ama xirayaan, aan dalku-dal somaliya gudaheeda la waydiin karin, aan la waydiin karin meesha ay u socdaan, aan la baari karin, aan canshuur la waydiin karin. Waxaa kaloo ku qoran warqadaas in ciidamaas dambi kasto oo galaan aan maxkamad la soo taagi karon, dacwadna aan lagu soo oogi karin. wax yaabo badan ayaa ku qoran oo damiir leh uusan saxiiixi karin. Bal ka baari bogan Somalitalk qoraaladiisii hore.
Marka nuur cade, shariif, iyo Abdirahman, ninka badda saxiixey waa in aan maalin ay noqotaba maxkamad soo taagno, waxayna galeen khiyaano qaran iyo dal iyo umad.
somali talk aad baad ugu mahad santahay, geesinimada baraarujindaada
sidii aad bada soomaliya in la iibsado aad uga soo rideen kuwii aan damiirka lahayn, hada waa in aan badinaa sidii qoralaaka iyo baraarujinta aan uga saari lahayn markiibta ciida ka badadtay. Ninkii damiir laeh ayaa xaqiiqda fahmaya long live somali talk
Saturday, October 9, 2010 at 5:16 pm
Nuur cade wuxuu saxiixay warqadii lagu soo galay somaliya waana ognahay lakiin sow ma ogidin in sheekh shariif uu ogyahay sababta buresselas, Nuur cade xafiiska beenta ah luugu furay wuu ogyahay waxana kama qaban ..
Marka ninka leh sheekh shariif muuu nuur cade wax ka qabto asagaan daacad ahayn qof aan daacad ahayn mid kale oo aan daacad ahayn wax kama sheego waxna kama qabto marka somaliya inay burburto wadamo badan ayaa sugaayay waana dhacday lakiin la socda kuwa nariday sida talyaaniga iyo kenya, iyo ethopia inaysan doonayn in aan mardanbe lugaheena ku istaagno..
Lakiin ilaahay ayaa aduunkaan leh, japan waxa ku dhacay naguma dhicin maantana waa wadamada aduunka ugu muhiimsan lakiin tan keliya een sameen karno waa inaan qornaa waxa nagu dhacaya si aan markaan lugaheena ku istaagno aan sharciga wadankeena u horkeeno hadii rabi idmo…
Marka somalitalk,, aad baad ugu mahadsantihiin sida geesinimada leh ee aad u qortaan marwalba dhibka loo gaysto wadankeenii hooyo iyo dadkeenaba..haka daalina inaad indhaha ku haysaan kuwa wadankeena maskax, iyo adin , iyo gacan wax ugu dhimaya…..
Waxaan somalitalk ka codsan lahaa inaad sameesaan raga somalida sida nuurcade iyo cabdi shakuur ninkii saxiixay bada somaliya inaad u sameesaan file la yiraa Danbiilayaasha somaliyeed….iyo midwalba wuxuu wadanka u geestay si hadhoow lagula xisaabtamo..marka dowlad somaliyeed dhalato…
Saturday, October 9, 2010 at 3:25 pm
SOMALITALK aadbaad ugu mahadsan tihiin qoraalka aad ka udheer una muhiimka ah,halkaa kahaya noosoo gudbinta hadba wixii kusoo kordha wadankeeda ama ay caalamkaba kaqoreen khayraadka dalkeena hooyo ALLOW SAHAL SAYMAHA ADUUN SUBAXBA WAA CAYNE.
Saturday, October 9, 2010 at 9:27 am
U sheeg sheeq shariif isagaa tuugsi ka bixi la marba wadan diyaarad u saaran badana intaas oo daqli laga dhacaa dadkiina loogu daray dil !